Toy izany koa ny Samsung Galaxy C9 | Androidsis
Araka ny efa fantatrao, ny orinasa Koreana Tatsimo Samsung dia naroboka tamin'ny voan'ny Galaxy Note 7 izay, rehefa "nilaozan'ny" orinasa, dia lasa voarara amin'ny sidina rehetra any Etazonia. Nefa na dia voavahan'ny orinasa aza io olana io dia tsy maintsy manohy mijery ny ho avy izy miaraka amin'ny tanjona roa hanangona ny vola very fa ambonin'izany rehetra izany, ny fahatokisan'ny mpanjifa.
Ary amin'ity lafiny ity, Samsung dia efa hamarana ny fandefasana smartphone vaovao, amin'ity tranga ity ny Galaxy C9 fa efa afaka nahita tamin'ny alàlan'ny sary voasivana sasany izahay rehefa avy nandalo ny TENAA.
Galaxy C9, filokana manaraka an'i Samsung
Misaotra an'ireo tovolahy avy GSMArena, Tsy vitan'ny hoe nahita izay ho endrik'ilay Samsung Galaxy C9 manaraka izahay afaka navoaka nandritra ny volana NovambraRaha tsy izany dia efa fantatsika ihany koa ny sasany amin'ireo famaritana ara-teknika azy.
Raha jerena voalohany, ny bokotra ara-batana izay efa nentim-paharazana ao amin'ny fitaovana Samsung dia hijanona, ary ny sensor ny dian-tanana dia hampidirina ao. Toa tsy ho tonga araka ny nampoizina ny fanjavonan'ity bokotra efa ela be voalaza ity, na farafaharatsiny tsy ho an'ireo fitaovana izay tsy eo amin'ny toerana avo indrindra.
Ny Samsung Galaxy C9 dia hanasongadina a Fampisehoana Super AMOLED 5,7-inch miaraka amin'ny 1920 x 1080 vahaolana megapixel.
Ao anatiny, ny rafitra iray manontolo dia hatosiky ny processeur Qualcomm Snapdragon 652 sy RAM 6 GB Saika tsy misy!
Ao amin'ny fizarana horonan-tsary sy sary dia toa hanolotra a Fakan-tsary 16 megapixel aoriana lehibe ary, tandremo ny iray hafa aloha koa 16 megapixels, noho izany dia ho hitantsika voalohany amin'ny fakantsary smartphone "for selfies" tsara indrindra (amin'ny teôria).
Raha momba ny fitehirizana dia ho avy izy miaraka 64 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny karatra microSD.
Amin'izao fotoana izao dia izao no fantatra momba ny Galaxy C9 ary koa, tsy fampahalalana ofisialy izany ka tokony hiambina hatrany amin'ireo dingana manaraka raisin'i Samsung isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ity no Samsung Galaxy C9 manaraka